Xilibaanada federaalka ee Caabudwaaq jooga oo bulshada Galguduud ugu baaqay xasilooni (Dhegeysi) – Radio Daljir
Oktoobar 19, 2013 3:43 b 0
Caabudwaaq, October 19, 2013 – Magaalada Caabudwaaq ee gobolka Galguduud waxaa maanta ka dhacay kulan balaaran oo ay ka soo qaybgaleen, bulshada degmada, maamulka, xilibaano ka tirsan federaalka, qurba-joog iyo aqoonyahano, waxaana intiisa badan diirada lagu saaray kulanka dhinaca amaanka iyo iskaashiga degmooyinka gobolka.
Xillibaanada dowladda federaalka ah ee Soomaaliya ee gaaray Caabudwaaq dhowaan ayaa halkaas u tegay sidii loo xalin lahaa dagaalada beelaha ee u dhexeeya dadka degan gobolka Galguduud, kuwaas oo dagaal ka dhasha deegaanka inta badan dhexmaro.
?Waxaan uga bixi karnaa nabadgeliyo in aan la qaadano deeganada nagu wareegsan, in aan horumar la qaadanayo deeganada nagu xeeraan, in aan ka midowno dadka xasaradaha wadda, iyo in odoyaashu ku baaqaan nabadgeliyo.? Ayuu yiri Xilibaan Nuur Faarax Cali oo dadka u jeediyey dardaaran.
Xilibaanada ayaa sidoo kale sheegay in loo baahan yahay in bulshada gobollada dhexe ay ka shaqeeyaan danahooda hoose, ?isla markaasna ay ku dadaalan nabada iyo horumarka, waxaa kaloo bulshada gobolka loogu baaqay in ay la yimaadaan wax soo saar.
Odoyaasha, culimada diinta iyo qaybaha kala duwan ee bulshada ka qayb galay shirka ayaa ku tilmaamay hadalladii goobta laga jeediyey kuwa nabadayn ah oo ay soo dhowaynayaan, dhowr jeer oo hore ayaa wufuud ka tirsan dowladda oo tegay Caabudwaaq ay bulshada ugu baaqeen xasilooni iyo in laga waantoobo dagaalka beelaha.
Dhegeyso: Ayaanle Cabdulaahi oo daljir ka tirsan ayaa warbixin ka diyaariyey